» सेतो टिका र सेतो दशैँ
सेतो टिका र सेतो दशैँ
४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०३:३१
कुनै एक जमाना थियो जुन बेला दशैँको टिकाको दिन भिजाएको चामलमा दहीँ मिसाएर बनाईएको सेतो टिका र रातो फूल शिरमा सिउरीएर घरबाट बाहिर निक्लन्थेँ । जमरा र रातो टिका लाउने चलन खासै थिएन हाम्रो घरमा । टिका लाएर एक अञ्जुली बुवाको आशिर्वाद र गाई पैसा गोजीमा हाल्दै बुवाको खुट्टा समाएर ढोगिन्थ्यो । एवम् रितले आमा, दाइभाउजु र दिदीलाई ढोग्दै चिउरा र मासुको पोका बोकेर साथीहरुलाई भेट्न पुग्थेँ ।
कसको कति दक्षिणा ? बहस् चल्थ्यो । अनि कहिलेकाँही तामाङले किन सेतो टिका लाउँछन् भन्ने बहस पनि । तर मलाई न त सेतो टिकाको बहसको मतलब थियो न त दक्षिणाको । मामाघर भएको तर आफ्नै साखै मामा नभएको मलाई दक्षिणाको खासै मतलब थिएन । खुशी यसैमा थिएँ किन कि मसँग मेरो परिवार थियो, मेरो बालापन थियो ।
तर त्यो खुशी सधैँको लागि थिएन । आज फर्किएर हेर्छु बिगतका दशैँलाई अनि एउटा नमिठो अतितलाई कुन्युँ लगाएर राख्ने कोशिस गर्छु । बालापनबाट युवा अवस्थासम्म आईपुग्दा बिस्तारै मैले मेरो आफन्त र मान्नुपर्नेहरुको सूचीमा केही अग्रजहरुलाई थपिसकेँको थिएँ । मैले मेरो खुशी बाँड्नकालागि मेरा आफन्तहरु बढाउँदै लगेको थिएँ जसको अभावमा पिडा पनि उत्तिकै भोग्नु थियो । जीन्दगीमा खासै नजिकबाट ननियालेको मृत्यूको ताण्डवलाई नजिकबाट नियाल्नु परेका दिनहरुले मलाई त्यतिबेला जति पिडा दिन्थ्यो आज पनि उत्तिकै पिडा दिन्छ ।
माईला दाई (स्व. किरण घलान) बाट सुरु भएको मृत्यूको ताण्डबले २ वर्षकै समयमा मबाट साईला दाई (स्व. बज्रबहादुर घलान) हुँदै जेठा दाई (स्व. बिरबहादुर घलान) लाई समेत सदाका लागि टाढा बनाई दियो । ससुरालीमा हजरबुवा (स्व. समरबहादुर योञ्जन) अनि आफन्तबाटै केही अन्य आफन्तलाई पनि त्यो दुई वर्षकै अन्तरालमा मैले गुमाएको थिएँ । माईला दाईको अल्पायुमै भएको मृत्युलाई नजिकबाट नियालेको मैले एक वर्ष भने साईला दाई र जेठादाईसँग सँगै दशैँ मनाउन पाएँ ।
आज पनि दशैँको माहोल छ चारैतिर तर न त निधारमा सेतो टिका हुनेछ न त सेतो दशैँ । केही काला अतितले दशैँलाई कालो बनाएको महशुस गर्दैछु । तर पनि यसपालिको फिक्का दशैँलाई केही विशेष बनाउन आमाबुवालाई भेट्न घर जाँदैछु । अनि मेरी जीवनसँगीनीकी आमाबुवा अर्थात मेरा सासुससुरालाई भेट्न ससुराली जाँदैछु । घरमा छोरा बुहारी दुबै बनेर जाँदैछु अनि ससुरालीमा ज्वाईँ छोरी दुबै बनेर ।
(मिति–२०७३ असोज १२ गते बिहीबार, दिउँसो १२ः५० बजे )